हड्डी कमजोर हुने समस्या ओस्टियोपोरोसिस होः अर्थोपेटिक सर्जन डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डे – Naulo News|online news|online news nepal
Home/समाचार/हड्डी कमजोर हुने समस्या ओस्टियोपोरोसिस होः अर्थोपेटिक सर्जन डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डे
हड्डी कमजोर हुने समस्या ओस्टियोपोरोसिस होः अर्थोपेटिक सर्जन डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डे
ओेस्टियोपोसिस भनेको शरीरको हड्डी कमजोर हुनु हो । यसले हड्डीलाई यति कमजोर बनाइदिन्छ कि साधारण चोटपटकले पनि भाँच्चिन सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मु्टुरोगपश्चात विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य समस्या हो, ओस्टियोपोसिस । तर, यो रोगको विषयमा कमै मानिसहरुलाई मात्र जानकारी छ ।
ओस्टियोपोरोसिस भएमा कुहिना, नाडी वा ढाडको हड्डी भाचिने गर्छ । साधारण गतिविधिका क्रममा समेत यी भागका हड्डी भाँच्चिन सक्छन् । प्रस्तुत छ नौलो न्युजले वीर अस्पताल ट्रमा सेन्टरका अर्थोपेटिक सर्जन डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो समय हातजोर्नी सम्बन्धीको समस्याका विरामी कति आउने गर्छन् अस्पतालमा ?
नेपालमा हड्र्डी दुख्ने वित्तिकै बाथ भयो भन्ने गर्छन् । विभिन्न किसिमको युकिकेसिटलाई मात्र बाथ भन्ने मात्र भन्ने हुन्छ । नेपालमा हड्डी र जोर्नी दुख्नेलाई बाथरोग भन्ने चलन छ । हड्डी खिइने अस्टिओ आरथ्राईटिस भन्ने गरिन्छ । सबै हड्र्डी र जोर्नी दुख्नेलाई बाथ रोग भनिदैन ।
हातजोर्नी सम्बन्धीको समस्या लिएर पछिल्लो समय धेरै नै आउने गर्छन् । सामान्य हात खुट्टाको हड्डी दुखेपनि बाथ रोग हो कि भनेर आउने गर्नुहुन्छ । तर सबै समस्या बाथ रोग भने होइनन् । बाथरोगलाई नेपाली जनमानसमा हाडजोर्नी समस्या भनेर बुझ्ने गरिन्छ ।
यो ओस्टियोपोरोसिस भनेको के हो ?
ओस्टियोपोरोसिस भनेको हड्डी कमजोर तथा पातलोे हुनु हो । ओस्टियो भनेको हड्डी हो पोरोसिस भनेको प्वाल हो । हड्डी कमलो हुने रोगलाई ओस्टियोपोरोसिस भनिएको हो । सामान्य चोटपटक लाग्दा पनि हड्डी भाचिन्छ । खाटबाट ओल्दा
जसका कारण हड्डी भाँचिने समस्या बढ्ने गर्दछ । यसले हड्डीलाई यति धेरै कमजोर बनाउँछ कि साधारण चोटपटकका कारण समेत हड्डी भाँचिनसक्छ । यसले हिपको हड्डी, मेरुदण्ड तथा नाडीको हड्डीमा बढी असर पार्ने गर्छ ।
यो के कारणले लाग्ने गर्छ ?
ओस्टियोपोरोसिस हड्डी कमलो र मखिने हुनाले भाचिने गर्छ । यो दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस जो सामान्य प्रकार हो, प्रारम्भिक वा प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस । यस प्रकारको ओस्टियोपोरोसिस उमेरसँगै बढेर जान्छ । महिलाहरुमा रजनोवृत्ति पश्चात्त हड्डी कमजोर हुन थाल्छ ।
अर्काे भनेको सेकेन्डरी ओस्टियोपोरोसिस हो । हाइपरथाइराइडिज्म, हाइपरप्यारायडिज्म वा ल्युकेमिया लगायतका कारण सेकेन्डरी ओस्टियोपोरोसिस हुने गर्छ । हड्डी कमजोर बनाउने औषधीहरुको प्रयोग, क्यान्सर भएका उपचारमा प्रयोग गरिने औषधीको सेवनले पनि यो समस्या कुनै पनि उमेरमा उत्पन्न हुनसक्छ ।
ओस्टियोपोरोसिसको समस्या प्रायः महिनावारी सुकेका महिलाहरूमा बढी हुने गर्दछ । महिनावारी रोकिएपछि हर्मोनले हड्डी बलियो बनाई राख्ने भएकाले महिनावारी रोकिएपछि हर्मोन हुँदैन त्यसैले पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी देखिन्छ । विशेषगरी ५० वर्षको उमेर पार गरेपछि यो रोग मानिसहरूलाई लाग्ने गर्दछ । एस्ट्रोजन हर्मोनको कमीले गर्दा यो समस्या बढी देखिन्छ ।
त्यसैगरी, ५० वर्ष भन्दा माथिको उमेर, कम तौल, एस्ट्रोजिन नामक हर्मोनको कमी, धूमपान, मदिरापान, पोषणरहित आहार लगायत कोर्टिकोस्टेराईड तथा हाइपर थाइराइडिज्मको समस्या भएका व्यक्तिले सेवन गर्ने औषधीका कारण पनि ओस्टियोपोरोसिसको समस्या हुने गर्दछ ।
यसका लक्षणहरु के के हुन् त ?
ओस्टियोपोरोसिस भएमा विभिन्न लक्षण देखा पर्ने गर्दछ । जोर्नीको दुखाई, सीधा बस्न तथा हिड्नमा कठिनाइ उत्पन्न हुनु, हड्डी कमजोर भएको तथा हडडी भाँचिएको ठाउँमा असह्य पीडा महसुस हुनु, कम्मर दुख्ने तथा शरीर कुप्रँदै जाने, सानोतिनो चोटपटक लागेमा पनि हड्डी भाँचिने जसका कारण ज्यान जानसक्ने सम्मको सम्भावना हुने,
ओस्टियोपोरोसिसबाट कसरी बच्न सकिन्छ ?
कुद्ने, नाच्ने शारीरिक श्रम पर्ने खालका व्यायाम नियमित गर्ने, क्याल्सियम तथा भिटामिन ‘डी’ को सेवन गर्ने, चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम ओस्टियोपोरोसिसको औषधी नियमित सेवन गर्ने,
हड्डीलाई विग्रनबाट जोगाउन के गर्ने ?
धूमपान नगर्ने, सोडियम अर्थात् नुनको सेवन कम गर्ने, दैनिक २३ मिलिग्राम नुनको सेवन शरीरको लागि राम्रो मानिन्छ ।
ओस्टियोपोरोसिसबाट बच्ने तरिका के के छन् ? के खाने ?
पर्याप्त क्याल्सियम तथा भिटामिन ‘डी’ को सेवन गर्ने, कम बोसोयुक्त डेरी प्रोडक्ट तथा हरिया साजसब्जी तथा फलफुलको सेवन, नियमित व्यायाम, धुमपान नगर्ने र मदिरा त्याग्नु पर्छ । ओस्टियोपोरोसिस भएमा दूध, दही, पनीर लगायतका क्याल्सियमयुक्त डेरी प्रोडक्टको सेवन गर्नु पर्छ ।
त्यस्तै, क्याल्सियमयुक्त पत्तेदार हरिया साजसब्जीको सेवनले पनि यो समस्या कम गर्न सकिन्छ । तुलसी, पुदिना सुप, दालचिनी, लसु, ज्वानोले पनि हड्डीलाई मजबुत बनाउने हुँदा यस्ता खानेकुराको सेवन पनि ओस्टियोपोरोसिसमा लाभदायक मानिन्छ । त्यसबाहेक, माछा, मासु, सुुन्तला, बदाम, तिल पनि क्याल्सियमको राम्रो स्रोत भएकोले यस्ता खानेकुरा पनि लाभदायक मानिन्छ ।
अर्थोपेटिक सर्जन डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डे
निर्मलाका बुबाको कलेजोमा संक्रमण, मुटुको चाल १३० पुग्यो